Football Khabar » आजबाट ला लिगाका खेल : को–को भिड्दैछन् ?
आजबाट ला लिगाका खेल : को–को भिड्दैछन् ?
काठमाडौं, पुस १८
स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगितामा आजबाट वर्ष २०२० का खेल सुरु हुँदैछन् । क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको बिदा सकिएसँगै लिग पुनः सुचारु हुन लागेको हो । आज लिगमा दुई खेल मात्रै हुनेछन् ।
आज हुने पहिलो खेलमा भाल्लाडोलिड र लेगानेसको खेल हुनेछ । यो खेल नेपाली समयअनुसार राति ११ः४५ बजेबाट भाल्लाडोलिडको घरमा हुनेछ । हाल लिगमा भाल्लाडोलिड १८ खेलपछि २० अंकका साथ १४औं स्थानमा छ भने लेगानेस १३ अंकका साथ १९औं स्थानमा छ ।
आज हुने दोस्रो खेलमा सेभिल्ला र एथ्लेटिक बिल्बाओको खेल हुनेछ । यो खेल नेपाली समयअनुसार राति १ः४५ बजेबाट सेभिल्लाको घरेलु मैदानमा हुनेछ । हाल लिगमा सेभिल्ला ३४ खेलपछि तेस्रो स्थानमा छ भने बिल्बाओ २८ अंकसहित सातौं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति १८ पुष २०७६, शुक्रबार ११:४२